I-Semalt: Hlala Uvikelekile Kulokho Okuqapha Ngezingcingo Ngezikhangiso Zamazwi We-WordPress
Sivame ukuzwa ngamawebhusayithi ahloselwe abaduni nabagaxekile. Abaningi be-webmasters bacabanga ukuthi uma kungekho idatha yokuba ezifana nemininingwane yekhadi lesikweletu noma ulwazi lwebhange, ukwehlisa izingosi zabo akunandaba. Ngeshwa, ayiphutha njengoba abaduni bangenza izinto eziningi ngeZwiPress zabo.
Izinto ezinkulu eziduni noma abagaxekile abangayenza nge-site yakho zichazwe ngezansi nguRyan Johnson, isazi esihamba phambili sika Semalt .
Amasayithi avuliwe bese uwathatha ungaxhunyiwe ku-intanethi:
Ngokuvamile, abaduni noma abagaxekile bashintsha okuqukethwe kwakho kwewebhu kanye nama-athikili ngokwabo. Ngokwesibonelo, amanye amawebhusayithi wezindaba ahlaselwa, futhi okuqukethwe kwabo kwezombangazwe kufakwe esikhundleni sezindaba ezihlobene nobuphekula - balilla tavolo. Abaduni bavele baqhayise ngokuthi bahlasele amasayithi akho futhi awukwazi ukwenza lutho ukufihla lokho abakwenzile. Noma ubani ovakashela isayithi lakho uzokwazi ukuthi isayithi lakho likhishwe. Isibonelo sesayithi elichasisiwe livulekile i-opennet.net. Kubantu abaduni abenza okuqukethwe kwakho nge-propaganda, iwebhusayithi yakho yindawo yokukhangisa mahhala.
Abaduni baqhubeka bethumela ama-imeyili ogaxekile kunani elikhulu labantu abasebenzisa ulwazi lwakho, njengamagama abasebenzisi noma amaphasiwedi. I-Statistica yembula ukuthi ama-54% kuwo wonke ama-imeyili athunyelwe noma ayitholiwe abegaxekile..Enye umbiko wokuhlola ucacisa ukuthi abahlaseli banciphisa izingosi eziningi ze-WordPress futhi basebenzise ukuthumela ama-imeyili ogaxekile kubasebenzisi abaningi nsuku zonke. Ezimweni eziningi, abakwa-webmasters abazi ngisho nokuthi amasayithi abo ahlaselwe abaduni. Bangase futhi baqaphele ukuthi amawebhusayithi ahamba kancane futhi amapikisi kuseva abe yinkinga evamile. Abahlaseli bathola izinzuzo ezimbili eziyinhloko kule nto: okokuqala, basebenzisa imithombo ye-server yakho mahhala. Okwesibili, bayonakalisa idumela lakho ku-intanethi bese bebhubhisa indawo yesayithi lakho kumiphumela yokusesha injini.
Abaduni noma abagaxekile nabo bahileleka emisebenzini enonya. Ukubuyiselwa kuyasebenza ukuthi baxhumane nomgwaqo ezindaweni ezihlukahlukene ezinonya nezingozi. Abasebenzisi abazi ukuthi lokhu kwenzeka kubo, futhi kuvamile uma izikhangisi zakho zingabonisi kahle. Abahlaseli basebenzisa ngokunenzuzo ukuqondisa futhi bathumele ithrafikhi eliphezulu kakhulu kumawebhusayithi abo. Isisusa sabo ukuthuthukisa izinga lezinjini zabo zokusesha kanye nokusabalalisa okuqukethwe okunonya kwi-intanethi.
AmaHhovisi wokuHamba amaHhovisi:
Abaduni basebenzisa ama-phishing amakhasi ukuze bakhohlise izivakashi ekuhlinzekeni ulwazi oluyimfihlo noma olubucayi. Ngokuvamile, balingisa ibhange noma abathengisi futhi bazame ukusenza sinikeze ulwazi olufana namagama ethu womsebenzisi namaphasiwedi. Basha futhi imininingwane yethu yekhadi lesikweletu esebenzisa lawo makhasi wokuphanga. Abahlaseli babamba ulwazi oluningi mayelana nesayithi elidumile le-WordPress, futhi isibonelo sekhasi lokuphangisa yi-eff.org.
I-Ransomware iyihlelo elibi elingavimbela ukungena kwisayithi lakho futhi lifuna ukuthi ukhokhe isihlengo uma ufuna ukuthola ukufinyelela okubuyiselwe. Abaduni basebenzisa i-ransomware njengendlela yokuthola, futhi ihlasela amawebhusayithi amaningi namabhulogi. Ukuze uvimbele ukuhlaselwa kwe-ransomware, kufanele ube ne-backup yamafayela akho. Uma unamafayela okusekelayo, kungase kudingeke ukhokhe isihlengo kubaduni ngoba ngeke bakuvumele ukuthi usebenzise isayithi lakho le-WordPress ngezinhloso zebhizinisi.
Kungakhathaliseki ukuthi yiluphi uhlobo lwebhizinisi owenzayo nokuthi uthola kangakanani ithrafikhi isayithi lakho le-WordPress, abaduni noma abahlaseli bangakwazi ukuthola kalula ukuthi bangasebenzisa kanjani amakhasi akho wewebhu ngezizathu zakho siqu.